About Us - Ningbo WEDAC Point of Sale Bonisa Co., Ltd
brand NBN-Cosmetic e Australia
TD Bonisa Pusher for Vitamin Box
Zenzekelayo Self-ukusunduza System Imiboniso
Bonisa Nazi Acylic
Okunye Bonisa Material
umnini ilebhile Price for hook
Inaliti wabumba Part
Drug self-oluzenzekelayo uthengisa ukubonisa
Yenza-up self-oluzenzekelayo uthengisa ukubonisa
Ningbo WEDAC Point of Sale Display Co., Ltd. kuyinto umenzi ngugqirha kuyilo, ukuphuhlisa kunye ukuvelisa ivenkile izixhobo ethengisa ukubonisa iintlobo ngeentlobo kwiindawo kuquka amashishini izithambiso, impilo-ukhathalelo Ande-icuba. Elise Ningbo kwiphondo Zhejiang, kufutshane odumileyo anzongonzongo-amanzi izibuko-Beilun izibuko thina, abaxhamla kwinethiwekhi yayo zokuhamba lula.
Ejolise ekunikeni inkonzo enye kwezixhobo isiboniso, siya ikakhulu ingqalelo kuyilo kunye nophuhliso. iimveliso zethu ziquka uluhlu olubanzi kuquka ivenkile ethengisa kwithala uthengisa & bonisa nomabi, POP / inkqubo POS, bonisa izithambiso, evenkileni / ivenkile bonisa kwikhabhinethi / nesakhelo / bhokisi, ukubonisa acrylic, bonisa LED, imiqondiso, ivenkile DIY iiyunithi ukubonisa & nezisombululo njl Kwakhona iinkqubo zethu kule ndawo iquka awokuvelisa acrylic, umsebenzi metal (CNC ukugoba, Ukuhlukunyezwa, laser ukusika), inaliti zeplastiki kunye nomsebenzi ngomthi.
Okwangoku, omnye kakhulu umsebenzi iimveliso acrylic umenzi e China. Emva nkqubo umgangatho kuqala, iinjineli bethu babe namava kule ndawo iminyaka engaphezu-10 sele lusekiwe kwaye kwaphunyezwa inkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo kunye nokusebenzisa artcraft okhethekileyo ukwanelisa iimfuno ezizodwa.
Ukubambelela intanda kwishishini win-win intsebenziswano, ebambekayo kunye ezintsha kunye bagqwese, WEDAC unikezelwa ukubonelela uyilo zobungcali, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo nangolwazelelelo. Kwiminyaka 10, iimveliso zethu ziye ngaphandle Australia, eJapan, USA ne amazwe aseYurophu kwaye esizisebenzileyo iiprojekthi ezininzi abathengi phesheya kolwandle abavela kwiindawo ezahlukeneyo. WEDAC ufuna ukuseka ubudlelwane iqabane kunye abathengi kokubini apha ekhaya nakumazwe aphesheya, yaye ngokudibeneyo ukudala nobangela olukhulu.
thina ngumvelisi ngugqirha kuyilo, ukuphuhlisa kunye ukuvelisa ivenkile izixhobo ethengisa ukubonisa iintlobo ngeentlobo kwiindawo kuquka amashishini izithambiso, impilo-ukhathalelo Ande-icuba.
Yenza Product wakho